जाडो मौसममा यसरी बचाउन सकिन्छ अनुहारलाई | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
जाडो मौसममा यसरी बचाउन सकिन्छ अनुहारलाई
प्रकाशित मिति १९ मंसिर २०७५, बुधबार २०:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । जाडोको समयमा प्रायः छाला सुख्खा हुने फुट्ने गर्दछ । हाम्रो शरिरलाई आवश्यक पर्ने पानी तथा झोल पदार्थ नखानुलगायतका कारणले छाला फुस्रो हुने फुट्ने समस्याहरु आइपर्छन् । यसले गर्दा हामी चिन्तित भइरहेका हुन्छौ । तर हामीले केहि साना–साना कुरामा मात्र पनि ध्यान दियौँ भने यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छौ । यस्तो समयमा हाम्रो छाला तथा अनुहारलाई स्वच्छ राख्न यी कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
१. मनतातो पानीको प्रयोग
हामीले जहिल्यैपनि जाडोको समयमा मन तातो पानीले अनुहार धुने गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा हाम्रो अनुहारमा रहेका बन्द भएका छालाका छिद्रहरु खुल्नको लागी मद्धत गर्दछ र अनुहारको छालभित्र रहेका फोहोरहरु निस्कन सक्दछ । त्यसले गर्दा अनुहार चम्किलो र सफा हुन मद्धत पुग्दछ ।
२. मोस्चराइजरको प्रयोग
हामीले हाम्रो अनुहार धोइसकेपश्चात मोश्चराइर क्रिमको प्रयोग गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा शुख्खा रहेको छालालाई कमलो बनाउन मद्धत गदर्छ र छाला फुस्रो हुनबाट बच्दछ ।
हामी अधिकांश ब्यक्तिहरु घरबाट बाहिर निस्कने क्रममा धेरै मेकअपक गर्ने गर्दछौ । जसले गर्दा पनि अनुहारमा बिभिन्न किसिमका समस्या देखा पर्दछन् । त्यसैले अनुहारको छाला राम्रो होस् भन्नाका लागी मेक गर्नु भन्दा पहिले टोनरको प्रयोग गर्नु पर्दछ । यसले छालाको छिद्रहरु बन्द हुनबाट बच्दछ ।
४. अत्याधिक मेकअपको प्रयोग नगर्ने
अनेक थरिका क्रिमको प्रयोग गर्दा अनुहारमा बिभिन्न समस्या देखा पर्दछ । त्यसैले घरबाट निस्कने क्रममा सामान्य मोस्चराइजर क्रिम र सन ब्लक क्रिमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
५.प्रत्येक घन्टा अनुहार सफा गर्ने
अधिकांश ब्यक्तिहरु बिहान मेकअप गरेर निस्किएपछि घर फर्केर मात्र मुख धुने गर्दछन् । यो बिल्कुल गलत हो । यदी अनुहार राम्रो बनाउन चाहानुहुन्छ भने घण्टामा एक पटक मुख धोएर सामान्य मोस्चराइजर क्रिम लगाउने गर्नुहोस् । जसले गर्दा तपाईको अनुहारको छाला स्व्चछ हुनुको साथै चमकदार हुनेछ । यदी मुख धुन सम्भब छैन भने तपाई हल्का भिजेको टिस्युले आफ्नो मुख सफा गर्न सक्नुहुन्छ ।
६.धेरै पानीको प्रयोग
जाडोको समयमा यदी तपाई कम पानी पिउनुहुन्छ भने यो बानीलाई तपाईले त्याग्नुपर्ने हुन्छ । पानीको कम प्रयोगले तपाइको छलामा चाहिने रक्तसंचार र पोषणहरु पुर्याउन सक्दैन जसले गर्दा अनुहारमा समस्या देखा पर्दछ ।
७. पर्याप्त निद्रा
कुनै व्यक्तिका लागि पर्याप्त निद्रा आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा तपाईको प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि नहुन सक्छ । त्यसकारण पनि तपाई पर्याप्त सुत्नुहोस् ।
आफ्नो खानामा अश्वगन्धा, अमला, तुलसी, त्रिफला जस्ता जडिबुटी समावेश गर्नु लाभदायक हुन्छ । यी जडिबुटीलाई चियाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी जडिबुटीहरुले हाम्रो शरीरको प्रणाली रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई बढाउन मद्दत गर्छ र छालालाई चमक ल्याउन सहयोग पुर्याउछ ।
९.चिसो पेयबाट बच्नुहोस्
डाक्टरका अनुसार चिसो खाना र चिसो पेय पदार्थले पाचन रसको प्रभावलाई कम गर्छ । यसबाट विषाक्त पदार्थको निर्माणमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले यस मौसमका दौरान प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि चिसो खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको सेवन नगरौं ।
१०.शरीरलाई क्रियाशील राख्ने
११. तनावरहित हुने
तनावका कारण हाम्रो हर्मोनको उत्सर्जनमा घटबड हुन जान्छ । जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो अनुहारमा देखिन्छ । त्यसैले तनाव कम गर्न योग गर्ने, मनमा नराम्रो कुरा नखेलाउने, आफ्नो र सबैको भलो सोच्ने गर्नुपर्छ ।
५ वर्षीय नातिनीलार्इ समेत छाेडेन पापी काकाले
बुटुवल । एकसाता भित्रै प्रदेश ५ मा आधा दर्जन बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
मंगलबार बांकेको कोहोलपुरमा ५ वर्षीय…
अझै दुई दिन देशभर वर्षा हुने
काठमाडौं । मनसुन पूर्ण रुपमा सक्रिय भएसँगै आइतबार साँझबाट देशैभर मध्यमदेखि भारी वर्षा भएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका…
बीबीसी हिन्दी लेख्छः भारतले पुरानो भारु नसाटिदिएपछि नेपालले नयाँ भारु प्रयोग रोक्यो
काठमाडौं । सरकारले भारतीय २ हजार, ५ सय र २ सय रुपैयाँ दरका नोट नेपालमा नचल्ने निर्णय गरेपछि त्यसको…
तरकारी खेतीमा आधुनिक प्रविधि
बुटवल । हाम्रै गाउँठाउँमा माटोविनै तरकारी फलाउन थालिएको छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । यस्तो अचम्मको किसिमको माटोविना…
यस्तो छ नेपाल र चीनबीच भएको ६ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । छ वर्षपछि आयोजित नेपाल–चीनबीच द्विपपक्षीय सीमा बैठक ६…
देशभरका कपडा उद्योग बन्द
काठमाडौं । ‘नेपाली कपडा उद्योग बचाऔँ’ भन्दै शनिबारदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण कपडा उद्योगहरू बन्द भएका छन् ।
लामो समयदेखि आफूहरूको मागको…